Izinto zokuthintela kuyilo xa sibeka isicatshulwa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izinto zokuthintela kuyilo xa sibeka isicatshulwa ukwenza isicatshulwa sethu sifundeke ngabasebenzisi kwaye sisebenze ngokuchanekileyo. Isicatshulwa kuyilo yinto esisiseko ekufuneka iphathwe ngokuchanekileyo ukuba sifuna umyalezo ufikelele kumsebenzisi ngokucacileyo, yiyo loo nto kufuneka siqiniseke ukuba isicatshulwa sisebenza ngokuchanekileyo.
Isicatshulwa ngasinye sahlukile ngokuxhomekeke kuyilo kodwa Umgaqo osisiseko kuzo zonke izicatshulwa kukufumana ulwazi ukufikelela kumsebenzisi. Kufuneka thintela imithwalo ebonakalayo ngokungeyomfuneko engadibanisi nto kuyilo lwethu kwaye idibanise ukufunda isicatshulwa. Kule posi siza kubona ezinye izimvo ezisisiseko malunga nokungakwenzi xa usebenza ngokubhaliweyo kuyilo.
1 Sebenzisa iifonti ezingafundekiyo
2 Umahluko olungileyo phakathi kwemvelaphi kunye nesicatshulwa
3 Sebenzisa iifonti ezininzi
4 Iziphumo ezingadibanisi nto kwisicatshulwa
5 Imibala egcweleyo kakhulu
6 Sebenzisa imibala emininzi kakhulu
7 Musa ukuseka ulawulo
8 Ukuqamba okungaqhelekanga kwisicatshulwa
Sebenzisa iifonti ezingafundekiyo
Xa sisebenza ngesicatshulwa into yokuqala ekufuneka siyenzile ukufezekisa kukuba isicatshulwa siyafundeka, Ayinamsebenzi ukuba isicatshulwa sethu sinomtsalane kwinqanaba lokubonwayo ukuba emva koko ukufundeka kubi. I-typography echanekileyo ixhomekeke kuyilo, ayifani nokuyilwa kwencwadi kunokubeka ipowusta, zombini zohlukile kwaye zifuna ingqalelo enkulu evela kumsebenzisi. Ukuba sisebenza ngombhalo omde, eyona nto ilungileyo kukuba ifundeke kakhulu ukuququzelela ukufunda. Ukuba isicatshulwa sethu sisihloko esiyintloko esinokudlala ngaso kunye nezinye iintlobo zeefonti kodwa sihlala sicinga nge ukufundeka kakuhle. Kufuneka thintela zonke ezo fonti zoonobumba zintle kakhulu ngokubonakalayo kodwa kunzima kakhulu ukuzifunda.
Umahluko olungileyo phakathi kwemvelaphi kunye nesicatshulwa
Nanini na xa sisebenza ngesicatshulwa kufuneka siphumelele Umahluko olungileyo phakathi kwemvelaphi kunye nesicatshulwa for yandisa ukufundeka, impazamo exhaphakileyo kukusebenzisa umbala ongasemva ofana kakhulu nalowo ubhaliweyo. Ukuba sijonga izicatshulwa zencwadi sibona ukuba iphepha limhlophe kwaye umbhalo umnyama ukuyenza ifundeke kakhulu, ukuba endaweni yomnyama sisebenzise umbala kunokwenza ukufunda kube nzima kwaye kungadinisa amehlo ethu. Kufanele si jonga isicatshulwa ngokungathi luphawu lwendlela, Kuya kufuneka ibize ingqalelo yethu ukuze sijonge kuyo kwaye sazi ukuba ikho.
Sebenzisa iifonti ezininzi
Kuqhelekile ukubona Uyilo kunye namawaka eefonti ezahlukeneyo Ukucinga ukuba oku kuzuza iziphumo ezingcono, inyani yile iyenza mandundu yonke into. Xa sisebenza ngesicatshulwa, kuyacetyiswa sebenzisa iifonti ezimbini ubuninzi kwaye badlale ngezitayile zabo (ngesibindi, rhoqo ... njl.njl) ukwenza umahluko okhoyo kwisicatshulwa. Ukuba siyila iprojekthi yokuhlela efana nemagazini kwaye sifuna ukongeza isihloko kunye nemibhalo engezantsi kuyilo lwethu, kuyacetyiswa Sebenzisa ifonti efanayo kodwa ubungakanani obahlukeneyo. Isitshixo kuyilo olulungileyo kukufezekisa ukuvumelana okusebenzayo hayi okokulinganisa okungafezekisi kwanto.
Iziphumo ezingadibanisi nto kwisicatshulwa
Simele kuphepha okoko singazisebenzisa zonke ezo Iziphumo ezongezwe kuhlobo lohlobo olungafaki kwanto Ukubhala kuphela yenza ukufunda kube nzima. Isiphumo sinokusetyenziswa xa kukho isizathu saso, mhlawumbi ngenxa yomxholo woyilo okanye ngesizathu esithile esinxulumene nesitayile. Kunqande ukusebenzisa iziphumo kwizicatshulwa nanini na apho unokudlala kunye nolunye uhlobo lokwahluka kuye fumana ulawulo oluphezulu.
Imibala egcweleyo kakhulu
Xa siyila ngombhalo kufuneka thintela ukusebenzisa imibala egcwale kakhulu kwimvelaphi nakwitekisi, ukusetyenziswa kwale mibala angadinwa amehlo akho xa ukufunda kukude. Kuyacetyiswa sebenzisa imibala ebengezelayo iitekisi ezinde. Singayisebenzisa le mibala kwiitekisi ezincinci ezingadingi kufundwa ixesha elide.
Sebenzisa imibala emininzi kakhulu
Ayikhuthazwa Guqula isicatshulwa sethu sibe yipinata enemibala igcwele imibala engamawaka, eyona nto ilungileyo yile sebenzisa umbala omnye Kwaye ukuba uyilo lwethu lusicela ukuba songeze enye ngendlela efihlakeleyo yokuqaqambisa iinkcukacha ezithile. Xa usebenza noyilo zibuze lo mbuzo ulandelayo: Kutheni usebenzisa imibala emininzi? Ngaba imibala inegalelo kwinto ethile?Sebenzisa imibala emininzi kuya kusaphula umxholo kunye nokuqhuba umsebenzisi ofunda eso sibhalo siphambeneyo. Umbala unokuba sisixhobo esichaseneyo ukuxelela umsebenzisi ukuba lo mbhalo ubaluleke ngaphezu kwabanye, ukuba usebenzisa imibala emininzi le ngcamango ilahlekile ...
Musa ukuseka ulawulo
Isicatshulwa ngasinye kuyilo sine amanqanaba ahlukeneyo okubaluleka, Kungenxa yoko le nto kufuneka chaza ulawulo ngokuchanekileyo yomxholo ngokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zokuthelekisa. Impazamo eqhelekileyo eyenziweyo xa kusenziwa isicatshulwa ayichazi ukubaluleka kwetekisi nganye, kufuneka sichaze ukuba ngawaphi amalungu abaluleke kakhulu kwisicatshulwa sethu ukusebenzisa kamva umahluko. Isihloko esiphambili siya kuhlala sikhulu kunesihloko esisezantsi, kuya kwenzeka okufanayo ngombhalo omde kunye neenkcukacha esifuna ukuziqaqambisa, ezinje ngesicatshulwa. Sinokusebenzisa umahluko ubungakanani bomzimba (onesibindi), umbala ... njl.
Ukuqamba okungaqhelekanga kwisicatshulwa
Amaxesha amaninzi ubuchule busihlasela kwaye sidala "uhola wendlela" ngombhalo woyilo lwethu odala iingoma ezinqabileyo ekunzima kakhulu ukuzifunda. Kuya kufuneka sicinge ngokuqiqayo xa sisebenza kwisicatshulwa kwaye sizibuze uthotho lwemibuzo: Ngaba ifundwe ngokuchanekileyo? iyaqondakala? Ngaba unayo ixesha lokuyifunda? Isicatshulwa sebhodi yezaziso asifani nakumagazini, eyokuqala kufuneka ikwazi ukufundwa ngokukhawuleza ngelixa eyokugqibela icotha ukufunda. Ngalo lonke ixesha jonga isizathu sokwenza uyilo ngakumbi lokuyila ngombhalo.
Ukusebenza ngesicatshulwa yinto efuna ixesha elininzi kunye neenkcukacha, Isicatshulwa esilungileyo sibuqili kodwa siyabetha, isicatshulwa esihle itsala umdla wethu ngokusebeza hayi ngokukhala. Xa usebenza ngesicatshulwa, kuyacetyiswa kakhulu ukuba wenze isifundo esincinci sendawo apho ubona ezininzi iimbekiselo ezibonakalayo (iimagazini, iincwadi ... njl.) ukukhuthaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Izinto zokuphepha kuyilo xa usebenza ngesicatshulwa
Iminyaka engama-30 ye-GIF yokuqala, ngubani owayenokucinga